» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २१, ईटहरीका उत्कृष्ट १०
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग २१, ईटहरीका उत्कृष्ट १०
१५ असार २०७७, सोमबार ०६:५०
चन्द्र घलान,मकवानपुर, १५ असार । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को ईटहरी अडिसनबाट १५ जना प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिने उदेश्यले तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजको यो २१ औँ भाग हो । यस भागमा ईटहरी अडिसनबाट छानिएका थप १० जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भागमा भुषण खतिवडा, रोहन श्रेष्ठ, सुमन नेपाली, राज विश्वकर्मा, अनिलजंग आचार्य, विशालदेव श्रेष्ठ, शोभा तामाङ, निशा कार्की, लेखराज ढकाल र सिद्धान्त खड्काका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
६) भुषण खतिवडा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका छैटौँ प्रतियोगी हुन् भुषण खतिवडा । नेपाल आईडलको मञ्चमा पनि चर्चा कमाएका भुषणले नेपाल स्टारमा पनि दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । झापा निवासी भुषण विभिन्न सांगितिक कार्यक्रममा पनि व्यस्त भईरहेका छन् । भुषणका केही गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनका सार्वजनिक गीतहरु पनि चर्चामा छन् । उनले नेपाल स्टारको अडिसनमा ‘मैले पूण्य मन पराएँ’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतमा निर्णायकलाई प्रभावित पार्न सफल भएका भुषणले दोस्रो पटक ‘जन्म दिने आमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डमा प्रवेश गरेका हुन् ।
७) रोहन श्रेष्ठ– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका सातौँ प्रतियोगी हुन् रोहन श्रेष्ठ । धरानमा बसोबास गरिरहेका रोहनको स्थायी घर तेह्रथुम म्याङलुङमा पर्छ । करिब ४ वर्षदेखि धरानमै बसेर अध्ययनसँगै संगीत क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल रहेका रोहनका केही कभर गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘मेरी आमा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
८) सुमन नेपाली– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका आठौँ प्रतियोगी हुन् सुमन नेपाली । बेलबारी निवासी सुमन हाल बिराटनगरमा अध्ययन गर्दैछन् । उनले अडिसनमा ‘हारेँ’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले दोस्रो पटक ‘सुन साईली’ र तेस्रो पटक ‘हेर्दा राम्रो माछापुछ्रे’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
९) राज विश्वकर्मा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका नवौँ प्रतियोगी हुन् राज विश्वकर्मा । मोरङको शनिस्चरे निवासी राजले ‘म बाँचेकै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी शोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१०) अनिलजंग आचार्य–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका दशौँ प्रतियोगी हुन् अनिलजंग आचार्य । ईलाम निवासी अनिल लाईभ म्युजिकहरुमा सहभागी भईरहेका छन् । होटलमा कार्यरत अनिल संगीतमा निकै रुचि राख्छन् । उनले अडिसनमा ‘बाबुको जुङ्गो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
११) विशालदेव श्रेष्ठ–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका एघारौँ प्रतियोगी हुन् विशालदेव श्रेष्ठ । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी भईरहने विशालका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘हरेक शब्दको’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् ।
१२) शोभा तामाङ–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएकी बाह्रौँ प्रतियोगी हुन् शोभा तामाङ । शोभाले यसअघि स्टेट १ सिंगिङ आईडलबाट पनि िचर्चा कमाएकी थिईन् । उनी उदयपुर निवासी हुन् । शोभाले अडिसनमा ‘यस्तै रहेछ’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् ।
१३) निशा कार्की–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएकी तेह्रौँ प्रतियोगी हुन् निशा कार्की । उनले अडिसनमा ‘पोखिएर घामको झुल्का’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । पहिलो गीतबाट निर्णायकमा प्रभाव नपरेपछि उनले दोस्रो गीत गाएकी थिईन् । उनले दोस्रो पटक ‘डुबिरहन देउ मलाई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् ।
१४) लेखराज ढकाल–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका चौधौँ प्रतियोगी हुन् लेखराज ढकाल । मोरङको उर्लाबारी निवासी लेखराजले सानैदेखि रेडियो सुन्दै संगीतप्रतिको लगाव विकास गरेका हुन् । उनी संगीत क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । उनले अडिसनमा ‘कसको माया’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
१५) सिद्धान्त खड्का–नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका पन्ध्रौँ प्रतियोगी हुन् सिद्धान्त खड्का । उनी यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागी भएका थिए । उनका केही ओरिजिनल गीतहरु पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले अडिसनमा ‘तिमी र म’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतबाट निर्णायकको मन जितेका सिद्धान्तले दोस्रो पटक ‘हिंड्दा हिँड्दै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनलाई गायक रामकृष्ण ढकाले स्टेजमै पुगेर दोस्रो राउण्डका लागि छनौट गरेका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।